I-Architect of the Satellites - Ulwazi lwezeMfundo | NASSAT
I-Anatomy yeSatellite Satellite-Architecture Basic
Iingcamango ezincinci zeModeli kunye neMilo
Iintlobo zama-satellites - Imbali yeSatellites Ukuze ufumane ukwanda okukhulu kwamandla okusebenza kunye neendleko ezincinci kunokwenzeka, uphando kwiindawo zonxibelelwano luvela. Ngenxa yoko, iimbono zeetellitethi zethungelwano zivela emva nje kweMfazwe Yehlabathi yesiBini, ngenxa yokuhlanganiswa kobuchwepheshe obuninzi obuhlukeneyo (iimfowuni kunye ne-microwaves). Le nangobudala kwisithuba yaqala 1957 kunye nosungulo Isathelayithi yokuqala eyenziwe ngumntu zwi I of the FSU, ibithwele osentabeni kwirediyo wazitsho uphawu kwi ezitsho 20 kunye 40 MHz. le mqondiso ingafunyanwa ngabamkeli abalula kulo lonke ihlabathi ukwenza uvavanyo lokuqala lokusasazwa kunye nokwamkela iimpawu ukusuka kwindawo.
Iimpawu zesatellethi Isona esona sigqwesileyo sisona sikhokelo seenkonzo ezibonelelwa ngeenkqubo zokunxibelelana ngee-satellite, ukubonelelwa ngokubanzi kweesatelliti kusetyenziswa ukuseka izixhumanisi ezide. Esinye isimilo seesatelliti kukuba banako ukuqokelela okanye ukusabalalisa iimpawu ukusuka kwindawo okanye kwiindawo ezahlukeneyo endaweni yokuhambisa ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye.
Yintoni i-satellite? I-repeat ye-elektroniki ehlala kwindawo, ifumana iimpawu eziveliswa emhlabeni, ziyakhulisa kwaye zibuyisele emhlabeni. I-satellite yiyiphi into ehamba kwindawo yokujikeleza okanye ijikeleze enye into. Ngokomzekelo, inyanga iyisitampu sehlabathi, kwaye umhlaba uyisitampu selanga.
I-satellite isebenza njani? Inomathotholo yomsakazo "A" ibonisa isignali efunyenwe yi-satellite. I-satellite iyakwandisa kwaye ibuyise kwakhona ngokukhawuleza. Umnxeba we-radio "B" uyamkela kwaye uyiphendule. Ngoko qalisa uqhagamshelwano lwe-satellite. Iipatethi zezonxibelelwano zisebenza njengezithuthi zokulayitha kwindawo. Zisetyenziselwa ukuthumela imiyalezo evela kwelinye inxalenye yehlabathi ukuya kwelinye. Le miyalezo ingaba nefowuni, imifanekiso yeTV, okanye i-Intanethi. Iipatellithi zokunxibelelana ezifana ne-EchoStar zihamba nge-orbit geosynchronous (geo = umhlaba + synchronous = ihamba ngesantya esifanayo). Oko kuthetha ukuba i-sateliti isoloko ihlala kwindawo ethile emhlabeni. Ummandla eMhlabeni onokuthi "Uyabona" ​​ubizwa ngokuba yi-satellite footprint.
Ø i-Satellites ye-orbit ye-geostationary. Xa okuwo kwi-moya sentshinyela komhlaba, kumgama malunga 36000Km (elingana 5,6 embindini womhlaba), kwaye ngenxa yoko, ixesha Orbital kanye lilingane ixesha ukujikeleza umhlaba (ie; 23 h, 56 min kunye 4s), eyaziwa ngokuba namhla sidereal, ngoko esiya kuthi, ukuba okuwo isathelayithi orbit kwaye isebenza kule okuwo yisathelayithi orbit. Le yayiyindawo yokuqala yokunxibelelana kweSatellite, kwaye ngokuqinisekileyo onke ama-satellites asetshenzisiweyo namhlanje kwiintetho zonxibelelwano yi-GEO. Izicelo eziphambili zezi satellites zibonisa ukutshintshwa kweengongoma.
Ø I-satellites ezinobungakanani obuphantsi (LEO).Leo Hewana ibekwe kwindawo yazo ephantsi, ka 1.500 km nge-avareji, kodwa kunokuba phakathi 200 kunye 2000 km, amaxesha Orbital aphakathi 90 kunye 120 imizuzu. Ezi abafayo nokujikeleza zasetyenziswa kwimihla ekuqaleni netheknoloji yonxibelelwano satellite njengenye amanqanaba isivalo ukuze zifike njongo ngelo xesha, ibe satellite orbit, xa kodwa kwakukho ndlela lungonelanga ukuphumeza amandla yokuqalisa efunekayo ukubeka i-satellite kwi-360000 Km yokuphakama ehambelanayo kwi-orbit geostationary.
Ø I-satellites yokujonga umhlaba.
Ø Ama satellites aseMeteorological.
Ø i-satellites zokuhamba.
Ø Iisetellithi zethungelwano.
Ø Ama-satellites amabutho kunye neentlola.
Ø Ii-satellites zomsakazo.
Inzuzo kunye neNzuzo
Ø Ukukhawuleza ngokukhawuleza kwenkxaso yeendawo ezininzi, ngokuchaseneyo neenkqubo zehlabathi zakudala, zokuphunyezwa ngokukhawuleza.
Ø Ukukwazi ukuzimela ngokuzimeleyo kwemida kunye nemingcele yemvelo njengentaba, njl.
O uthumelo satellite kuxhomekeke ukulibaziseka andise, buthathaka imvula, ikhephu kunye iindawo ilanga ezichaphazela izikhululo emhlabeni, nayo ubunzima erediyo, microwave kunye moya.
Ø Iindleko eziphezulu.
Ø Ubomi besikhathi.
Ø Ingxaki yomthetho.
Ithempyutheni Yona yinkalo ephambili kunye nenyanzeliso yomnatha apho iqela leekhonkco ezifanayo lidlulayo. Ngaloo ngqiqo, inokuthi ithathelwe ingqalelo njengengcambu yomnatha. Imisebenzi ephambili ye-satellites ye-satellite yile ndlela ilandelayo: Ø Ukukhupha izibonakaliso zephatha zokufumana ukubuyiswa kwakhona kwi-downlink. Ø Utshintsho lwamaxesha obuninzi beempawu zokuthintela ukukhusela iingxaki zokuphazamiseka Ø I-satellite inokuhlawula umvuzo kunye neqonga. Ø Ukuhlawula umrhumo kubandakanya ukufumana kunye nokuthumela ii-antenna, kunye nezixhobo zecomputer ezisekela ukuhanjiswa kweempawu zendlela yokuphatha. Ø Iqonga liqulethe zonke iissystem ezenza ukuba umrhumo wokuhlawula usebenze.